Hamro Kantipur | अख्तियारमा २५ हजार उजुरी, प्रदेश २ अग्रस्थानमा अख्तियारमा २५ हजार उजुरी, प्रदेश २ अग्रस्थानमा
अख्तियारमा २५ हजार उजुरी, प्रदेश २ अग्रस्थानमा
काठमाडौं, आर्थिक अनियमितताका उजुरीमा प्रदेश २ अग्रस्थानमा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अनियमितताका सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ का रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कुलमध्ये २३ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश २ का छन् ।
अख्तियारमा जिम्मेवारी सरेका समेत २५ हजार १५२ उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये १६ हजार ९५२ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । आठ हजार दुई सय उजुरी जिम्मेवारी सरेका छन् । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशका छन् । कर्णालीका पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै प्रदेश १ का ९ दशमलव ८२ प्रतिशत, लुम्बिनीका १० दशमलव ७९ प्रतिशत उजुरी छन् । सुदूरपश्चिमका आठ दशमलव ४४ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमतीका १९ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी छन् ।
एक करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका मुद्दा २९ थान रहेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ समाज र सुशासनयुक्त राज्यको परिकल्पना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । भ्रष्टाचारजन्य कार्य न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै निकायबीच सहकार्यको आवश्यकता राष्ट्रपति भण्डारीले औँल्याए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यको समेत आवश्यकता भएको उनको जोड छ ।
यस्तै, प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले सुशासनसम्बन्धी राज्यले लिएका नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको डा. जोशीको भनाइ छ ।गोरखापत्रबाट